Nahazo trano hanaovana fihofanana mahakasika ny tetikasa « FIHARIANA » Antsirabe, izay miorina eny Ambaniandrefana, ary hifanindran-dalana amin’izany ny tolotra sy fampitaovana ho an’ny tontolon’ny famokarana.
Hovitaina alohan’ny faran’ny taona ny Kianja mitafo eo Vatofotsy, ary hatao manara-penitra. Hisy dobo filomanosana eo ivelany, ary azo hafanaina ny rano hampiasaina aminy. Ahazo kianja manara-penitra ihany koa Antsirabe.
Hisy ny fananganana “Village Communautaire” eo Vinaninkarena ka trano miisa 100 no haorina ho an’ireo olona marefo ara-pivelomana, ka sady homena biby fiompy izy ireo mba ahafahany mivelona sy manatsara ny fari-piainany.
Santionany amin’ireo tetikasa tanterahin’ny fanjakana eto Antsirabe ireo, nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny diany teto an-drenivohitry ny Faritra Vakinankaratra.